Shiinuhu wuxuu furayaa xuduudaheeda kadib markii 85% dadka la tallaalay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Shiinuhu wuxuu furayaa xuduudaheeda kadib markii 85% dadka la tallaalay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Shiinaha • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Gao Fu, madaxa Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada
Haddii heerka tallaalka uu gaaro in ka badan 85% horraanta 2022, waxaa jiri doona infekshanno yar oo midkoodna uusan qabin xaalad halis ah ama dhiman.
Tirada guud ee tallaalka dadweynaha Shiinaha ayaa gaari karta in ka badan 85 boqolkiiba horraanta 2022 -ka.
Tallaabooyinka xakamaynta cudurrada faafa ee hadda ka socda Shiinaha waxay ku guuleysteen waqti badan si ay u soo saaraan tallaallo ku filan oo ay dadka u tallaalaan.
Heerka tallaalka 85%, baahinta iyo heerka dhimashada COVID-19 waxay la mid noqon doontaa hargabka.
Sida laga soo xigtay masuulka ugu sareeya oo ka Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Shiinaha, Shiinaha ayaa laga yaabaa inay furto xuduudaheeda horraanta 2022, haddii ay tallaasho in ka badan 85% dadkeeda waqtigaas.
Tallaabooyinka xakamaynta cudurka faafa ee hadda jira ayaa ka dhan ah COVID-19 gudaha Shiinaha waxay ku guuleysteen waqti badan si ay u soo saaraan tallaal ku filan oo ay ku tallaalaan dadka, Gao Fu, oo madax ka ah Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada, ayaa yiri.
Ka sokow, dulqaadka coronavirus -ka ayaa sidoo kale hoos u dhacaya, sida uu sheegay Gao.
"Waqtigaas, maxaan u furnaan la'nahay?" ayuu yiri sarkaalku.
Marka heerka baahinta iyo dhimashada ay Covid-19 waxay u eg yihiin hargabka, waxayna umuuqataa inay la noolaan doonto aadanaha, dadaallada lagu tirtirayo fayrasku waxay noqon doonaan dagaal daba dheeraada, ayuu yidhi.
"Markay sidaas tahay, waa inaan sii wadnaa tallaalka dad badan, sameynta tallaallo cusub, gaar ahaanna, soo saarno dawooyin wax ku ool ah."